NOOCYADA TARBIYADA CAAN KU AH EE VIBURNUM - BEERTA
Sida loo faafiyo Kalina: Faa'idada Faa'idada
Ku qurxin goobta oo leh baadiyaha quruxda badan ama geedka yar yar waa wax caadi u ah bannaanka. Waxyaabo badan waa in la tixgeliyaa: laga bilaabo xaalada ciidda si loo dayactiro. Hase yeeshee qodobka go'aanka ah wali waa habka qaybinta iyo degitaanka. Aan aragno sida loo kiciyo viburnum.
Tani waa midka ugu waxtarka badan, laakiin waqti isku mid ah, qaabkani waa mid adag. Beeralayda waxay og yihiin in qaabkan oo kale loo fulin karo laba siyaabood: "xawaareyn" iyo in ka badan oo la qiyaasay. Midka koowaad waa mid fudud. Diyaarinta waxay bilaabmaysaa xilliga qaboobaha, iyo koorsada shaqada waxay u egtahay sidan:
Xilliga jiilaalka, ka jar caleemaha sanadlaha ah ee 15-20 cm dherer.
Mudo 2-3 saacadood ah ayaa lagu rusheeyaa biyaha, kadibna waxaa la geliyaa boorso caadi ah, xiran oo la dhigo ilaa guga heerkulka hooseeya. Tani, shaqadan waxaa lagu fuliyaa qarsoodi qallalan.
Beerto waxaa la sameeyaa marka ciidda ay u kulushahay ugu yaraan 10 ° C si qoto dheer 10 cm.
Nidaamkani wuxuu ku siinayaa beeritaanka oo isku xigta, oo leh mudo ah 10-15 cm inta u dhaxaysa gooynta. Isla mar ahaantaana, waxay isku dayayaan in ay dhigaan iyaga oo hoos maraya: hal kelye oo ka sareeya dhulka, tan labaad - si sax ah heerkulka dhulka.
Waa muhiim! Kalina isku day in aad ka soo baxdo midhaha iyo miraha beeraha caadiga ah. Tan waxaa sabab u ah saameynta gaarka ah ee rhizomes ay on ciidda. Burburku si gaar ah ayuu "khilaafsan yahay" oo leh caws iyo miskaha.
Xayawaanka ayaa si aad ah u waraabiyey oo is dulqaadan. Next "classic" - waraabiyo iyo jaridda.
Deyrta, geedo waxaa loo wareejiyaa meel joogto ah.
Faafinta gooynka viburnum leh beeritaanka dheeraad ah guga waxaa loo samayn karaa hab kale. Waxaa caadi ahaan loo yaqaan "cagaaran" ama sayniska. Marka hore waxaan eegaynaa in shaqada ka dib duurka ayaa si fiican u koraan:
Inta lagu jiro ubax (Juun - horraantii Luulyo) gooyn caleenta goosashada. Waxaad qaadan kartaa iyo kuwii hore u bilaabay inay adkaadaan. Waxa ugu muhiimsan waa in ay noqdaan kuwo cufan leh. Haddii, markaad qallafsan tahay, ay soo baxaan, oo aan jebin, waxaad saxsanayd doorashadii.
Caleemaha waxaa la jarjaraa burooyinkeeda ugu horeysa (qiyaastii 7-12 cm) waxaana loo kala qaybiyaa gooyn. Qeybta hoose ee qiyaasta hoose waa 1-1.5 cm oo saldhig ka ah jarista kelyaha (xagasha xagasha 45 °), kan ugu sarreeyana waxaa loo sameeyay labada nin ee soo socda, si toos ah u goynaya.
Markaas ka soo gooyn jaray caleemaha hoose. Qodobka sare ayaa la gooyaa kala badh.
Dheecaannada waxaa lagu meeleeyaa kiciyaha "xididka". Talooyinka waxaa lagu dhajiyaa 1.5-2 cm. Dareeraha waa inaanay ku dhicin caleemaha, sidaa darteed iska ilaali. Heteroauxin (100 mg / 1 l oo biyo ah) ayaa ah dawada ugu fiican;
"Taangiyada" noocan ah ayaa lagu meeleeyaa meel gudcur ah 10-16 saacadood.
Wixii beerto waxay isku diyaariyaan koriyo yaryar oo ku yaalo geeska shady ee goobta. Qorraxda tooska ah ee waraabinta noocan ah waa mid aan loo baahnayn. Heerkulka ugu fiican waa + 27 ° S ... + 30 ° C.
Dusha substrate iftiin. Lakabka ugu hooseeya ee 10 cm - isku dar ah carrada cawska, peat iyo ciid qalafsan (ee saamiga 3: 1: 1). Peat waxaa lagu beddeli karaa humus. Lakabka sare ee 3-5 cm wuxuu ka kooban yahay saamiyo isku mid ah peat iyo ciid (halkan la'aanteed "organic").
Beerto waxaa loo sameeyaa sida waafaqsan nidaamka: 7 cm inta u dhaxaysa safarka iyo 5 cm inta u dhaxaysa gooyn. Waxaa loo dhigaa si aan caadi ahayn, si qoto dheer ah 1.5-2 cm oo lagu daboolay filim ama qaabka aqalka dhirta lagu koriyo.
Saddexda toddobaad ee soo socota waa xidid: waqtigan geedka waxaa lagu buufin karaa biyo 3-4 jeer maalintii. Waqtigaas ka dib, aqalka dhirta lagu koriyo ayaa loo furay hal dhinac, kadibna dhowr toddobaad oo kale ka dib ayaa dusha laga saaraa dhammaantiis.
Waa muhiim! Halkii "Heteroauxin" waxaad isticmaali kartaa xalka IMC (indolylbutyric acid). 50 mg oo maadi ah ayaa lagu daraa 1 l oo biyo ah waxayna qallajiyaan xididada nus maalin.
Iskusoo marin isku meel oo isku mid ah, waxay ku daboolan yihiin caleemo dhoobo ah ama lutrasil cufan. Haddii aysan jirin qalab noocaas ah, caleemaha qalalan ayaa soo bixi doona.
Guga, ka saara mulch, waxay u guuri karaan meel joogto ah. Laakiin qaar ayaa fasaxaya xilli kale. Sidaa darteed geedo ugu dambeyntii xoojiyay.
Digo godad qoto dheer, adigoo ka tagaya hareeraha yar ee hoose.
Dhalo yar ayaa la dhigayaa, xididada waxaa loo wareejiyaa hareeraha. Qoorta xididku wuxuu u qotomaa ugu badnaan 7 cm, qaabka guud ee beerka waa 50 x 15 cm, dhawr sano ayaa jiri doona duurka dhallinyarada ah.
Dhamaan hawsheeda, habkani waxa uu leeyahay mid faa'iido leh oo la fahmi karo - waa u mahadsan tahay, waxaad heli kartaa tiro badan oo dhir ah, gooynna waa la aqbalaa.
Ma taqaanaa? Kalina waa mid ka mid ah calaamadaha muhiimka ah ee dhaqanka dadweynaha. Waxaa jira heeso iyo halyo badan oo ku saabsan. Maalmihii hore, wadiiqo shaqo ayaa sidoo kale lagu go'aamiyey dhirtaas: tusaale ahaan, waxay isku dayeen inay beeraan shaciir inta ay wali socotay.
Tani waa qaab fudud oo aan u baahnayn dadaal dheeri ah:
Xilliga dayrta dhirta yaryar waxay kudartaa laamo yar, iyaga oo ka tegaya 3-4 burooyinkoodii. "Jir" ayaa la jaqayaa sareeya.
Guga ee isla burooyinkuba waxay kortaan caleemo cusub. Marka ay gaaraan 8-10 cm, waxay ku fidayaan ilaa dherer ah 4-5 cm.
Maqaarado soo gaaray 25-30 cm "qabsasho" saldhigga leh naxaas ama silig aluminium ah oo mar labaad la jarjaro 1/3 ee dhererka.
Ka dib 10-14 maalmood ka dib soo noqo hilling.
Ilaa iyo xilliga dayrta, caleemaha waxay yeelan doonaan waqti ay qaataan xididka, ka dibna waa la qodayaa, oo laga soocaa baadiyaha hooyada oo lagu beeray meesha loo qoondeeyey. Waa wax aan loo baahnayn in la hirgeliyo goobta kala qaybinta: barkada beerta ama xayawaanka kale waxay ka sameeyaan filim ku saabsan gooyaa, taas oo aan ku dhowdahay in hawadu u gudubto.
Soo degitaanka waa mid dhaqameed. Daloolka waa qashin, waa qoyan, seedling ugu horeysay beeray wax yar oo xagal ah, xidid xidid prikopav 5-7 cm.
Hooska u dhaxee barafka ka samee hoyga.
Qaraabada noolaha ee viburnum waa mid elderberry ah: labada dhireedba waxay ka tirsan yihiin isla qoys - Adoxaceae.
Sida aad u arki karto, wax waliba waa sahlan, ma jirto koriyo iyo xalal. Looma baahna habka soo socda ee liiska.
Ku dhajinta qaababka tooska ah
Shaqooyinka waxay bilaabaan guga waxayna daboolayaan laba xilli:
Laamaha 2-3-sano jir ah ayaa laga jarayaa baadiyaha (qaar ayaa sidoo kale saaraan afar-jirka, laakiin ma weyn). Waxaa jiri laamo leh 3-4 burooyinkoodii. Sannadka hadda, waxaan ka tagnaa viburnum kali ilaa guga soo socda.
Waa muhiim! Haddii gooyn badani la diyaariyo, waa la geyn karaa kahor inta aan loo dhexgelin xalka xoojinta.
Sannad ka dib, caleemaha yar yar ayaa la gooyaa illaa 1/5 oo dhererka oo dhan ah oo xannibmay carrada.
Waxay la dhigaa qoryaha diyaarsan (5-6 cm oo qoto dheer), oo lagu xiro qabatooyin. Fadlan ogsoonow: calaamadaha noocaan ah marna ha marin! Waa inaan sugnaa ilaa burooyinkuna ay garaacaan caleemaha ugu yaraan 10 cm.
Markaas godka waxaa ka buuxsamay substrate of humus iyo peat ee saamiga siman. Dusha sare waa inuu ku sii jiraa dusha. Hilling ugu horeeya waxaa lagu sameeyaa budada ilaa nuska dhererka caleemaha.
Xilliga xagaaga waxay sameeyaan 2 hill ah oo u dhexeeya 2 toddobaad. Dhimirka ugu sarreeya waa inuu gaaraa 20-25 cm.
Iyadoo bilawga xilliga dayrta, gooynta laga gooyay baadiyaha weyn, iyo caleemaha ayaa laga soocay, kaas oo markaa koray oo xoogaystay. Waxaa lagu beddelaa meel kale.
Farsamo kale oo fudud oo aan waqti badan qaadan:
Tobanka sano ee la soo dhaafay ee bisha May - maalmaha koowaad ee bisha Juun, waxay fiiriyaan hababka koray 20 cm. Si loo kobciyo koritaanka xididada, waxaa lagu jiiday silig jilicsan (oo saldhig u ah).
Isla markiiba qallajin ilaa dherer ahaan 7-8 cm.
Habka isku midka ah ayaa lagu celiyaa 2-3 jeer xagaaga. By dayrta waa in la helo hudheello 20-inch. Sannadkan, lama taabto, ka tago baadiyaha xilliga jiilaalka.
Laakiin guga soo socda, korniinka noocan oo kale ah waxaa laga soocaa viburnum waxaana loo wareejiyaa meel diyaarsan. Tiknoolajiyada beeraha ayaa yaqaanno warshadan oo uma baahnid hawlo kale. Kaliya iskuday inaadan qoto dheereyn qoorta.
Waxaa jira habab dheeraad ah, taas oo sababa su'aalo badan oo loogu talogalay inuu bannaanka u. Waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno.
Kalina Buldenezh ("gloom globe") - muuqaal aad u qurux badan oo viburnum ah, oo ay jecel yihiin bannaanka u badan. Baro wax badan oo ku saabsan taranta iyo sii kordhaya geedkan qurxinta.
Xiriiriyayaashu waa inay u hoggaansamaan talada Fiisooyinka waxayna tixgelinayaan in ay diyaar u yihiin in ay qaataan shaqadan. Xaqiiqdu waxay tahay in miraha viburnum ay leeyihiin biqilka aan lahayn - kaliya 12-20% oo ah germinates beerashada. Waa suurad wacan in ay isticmaalaan waxyaabaha sida ugu horeysay, ugu badnaan sannadka labaad ee goosashada ka dib: biqilka 2-sano ee miraha viburnum. Haddii aad go'aansato inaad isku daydo habkan oo kale, ka dib tallaabooyinku waxay noqon doonaan sida soo socota:
Casiirka waxaa laga tirtiraa berry bisil, miraha waa la dhaqaa.
Waa muhiim! Geedo qoyan leh leh buufin, si joogto ah u ilaalinaysa qoyaan dhoobo ah. Caasimada caasimadda muddadan xiligan lama isticmaalo, si aanay u dhaqin miraha.
Ka dib markii la qalajiyo, waxaa lagu dhejiyaa naqshad nylon ah oo buuxa balka qoyan. Labadii biloodba heerkulka qolka ayaa ku filan iyaga inay bilaabaan Gagaash.
Kadibna waxay u tageen "jiilaalka" bil gudaheed qaboojiyaha heerkul ah 0 ° C ... + 5 ° C
Ka dib markaan "geedo adag" geedaha waxaa lagu dhejiyaa cajalado, dheriyo ama sanduuqyo, oo ku riixaya abuurka 3-4 cm, waa ku filan oo keliya inay soo saaraan oo ku rusheeyaan substrate. Caleemaha si dhakhso ah ayey u muuqdaan, ka dibna soo qaado. Waxaa soo noqnoqonaya markii seedling uu korayo 5 cm.
Bishii Abriil, marka qabowgu uusan halis gelin, waxaad u wareejin kartaa geedo si aad u furan.
Kordhinta waxay socotaa 2 sano, oo markaa kadibna geedo noocan oo kale ah ayaa loo wareejiyaa meel joogto ah. Dhamaan waqtigan dhallinyaradu waa la waraabiyaa, oo la quudin jiray "biyah" macaan "iyo" macaan "macaan", iyo sidoo kale mulched.
Ma taqaanaa? Kawaska iyo gobollada koonfurta qaarkood, Kalina madow ayaa laga heli karaa. Waxay u egtahay mid aan caadi ahayn, laakiin berry waa sun.
Ka hor inta aan la beerto viburnum, fadlan ogow in geedo "abuur" bilaabi doonaa oo kaliya ilaa 5-6 sano, halka qaybta daaqsinka this muddo 2-3 xilli.
Hadda waxaad taqaanaa sida loo kiciyo viburnum bogga. Waxaan rajeyneynaa in aqoonkani uu faa'iido u yeelan doono ficil ahaan, iyo dhowr sanadood goobta ayaa xitaa ka farxin doonta isha. Tijaabooyin guul leh!